Xiddiga reer Argentina Ee Lanzini Oo Dhaawacmay, Liiska Koobka Adduunka Oo Laga Saarayo Iyo Ciyaartoyga Lagu Beddelayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Xiddiga reer Argentina Ee Lanzini Oo Dhaawacmay, Liiska Koobka Adduunka Oo Laga Saarayo Iyo Ciyaartoyga Lagu Beddelayo
Published on June 8, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(08-06-2018) Xulka qaranka Argentina ayaa u safraya waddanka Ruushka iyadoo uu ka maqan yahay laacibka khadka dhexe ee Manuel Lanzini, kaddib markii uu dhaawac ka gaadhay xili uu tababar qaadanayey.
Lanzini oo ka mid ahaa 23-ka ciyaartoy ee uu tababare Jorge Sampaoli usoo xushay inay uga qayb-galaan Koobka Adduunka ayaa dhaawac culus uu ka gaadhay jilibka, kaas oo noqday jabniin aan sinaba suurtogal uga dhigi doonin inuu dhowaan garoomada kusoo laabto.
25 jirkan u ciyaara West Ham ayaa xili ciyaareedkii tegay 27 kulan oo uu horyaalka premier League saftay waxa uu dhaliyey shan gool, hase yeeshee, waxa uu qayb weyn ka ahaa dibu-soo kabashadii naadiga reer London ugu negaadeen horyaalka heerka koowaad kaddib markii ay qaybtii hore ee xili ciyaareedka ka mid noqdeen naadiyada meelaha ugu hooseeya ku jira.
Lanzini oo ciyaaray kulankii ugu dambeeyey ee Argentina iskugu diyaarinaysay Koobka Adduunka ee toddobaadkii hore ay 4-0 kaga adkaadeen Haiti ayaa waxa uu si ramsi ah uga hadhay xulka, halkaas oo uu noqday ciyaartoygii labaad ee qaranka muhiim u ah ee ka hadha, waxaana kasii horreeyey goolhaye Sergio Romero oo ku dhaawacmay ciyaartii saaxiibtinimo ee waddanka Spain.
Warka dhaawaca Lanzini oo uu si rasmi ah ugu dhowaaqay xidhiidhka kubadda cagta Argentina, ayaan dhinaca kale weli la caddaynin laacibka lagu beddeli doono, iyadoo sida sharcigu dhigayo ay waddamadu soo beddelan karaan ciyaartoyga ka dhaawacma maalin ka hor bilowga Koobka Adduunka, wakhtigaas wixii ka dambeeyana aan laga ogolaan doonin.
Lama hubo in tababaruhu uu go’aamin doono inuu laacib khadka dhexe ah booskiisa kusoo buuxado iyo inuu weerarka xoojisto oo uu u yeedho Icardi, waxaase la ogyahay in laacibiinta awoodda badan ee khadka dhexe ee Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Giovani Lo Celso, Cristian Pavon, Maximiliano Meza iyo Eduardo Salvio ay dhamaantood diyaar yihiin.
Argentina waxay ku jirtaa group D oo ay ku wehelinayaan Croatia, Nigeria iyo Iceland.